Linux 4.5.4: iyo nyowani kernel vhezheni iri kunze | Linux Vakapindwa muropa
Linux inoenderera neshanduko nhanho nhanho uye isina zororo. Vagadziri veKernel vanoramba vachiwedzera mashandiro, kugadzirisa madhiragi, kugadzirisa madhiraivha, uye kuchenesa kodhi zvisingaite Zvino ndinoziva inopa Linux 4.5.4, imwe vhezheni nyowani yekernel yeyedu yatinofarira mashandiro. Uye iye anotarisira kuzivisa kwake anga ari ruoko rwerudyi rweLinus Torvalds, anovandudza GReg Kroah-Hartman.
Kuenzaniswa neLinux 4.5.3, iyo nyowani yeLinux vhezheni 4.5.4 ine zvakawanda zvakagadziridzwa, mune akazara 49 kernel mafaera akachinjwa, iine mazana matanhatu akaiswa uye 600 kubviswa mune yayo sosi kodhi. Iyo yekuvandudza iyo inokwenenzvera zvechokwadi kune vese vashandisi ve kernel 238. Asi ikozvino isu ticha tsanangudza izvo zvitsva mushanduro iyi nyowani yakaburitswa uye izvo, zvokwadi, iwe unogona ikozvino kurodha pasi kuti uzviise mune yako system kana uchida ...
Pakati pe kugadzirisa kwakaitwa mu kernel 4.5.4 ndiko kugadzirisa uye kugadzirisa kwevamwe mabhuregi akakanganisa iyo ARM dhizaini, kuvandudza zvine chekuita nePPC (PowerPC), zvakare yeX86, ARC, uye PA-RISC. Chikamu che network chakasimudzirwazve nekuvandudzwa nezvitsva mu netfilter, mac80211, BATMAN Yepamberi, uye mamwe akawanda mabhugi akagadziriswa iyi vhezheni. Asi hazvingogumira ipapo, sezvo mamwe madhiraivha mazhinji akagadziridzwa kana kuiswa.
Ndiyo nyaya ye Vanodzora yeIntel i915 GPUs, pamwe neakakurumbira AMDGPU, ACPI, ATA, CLK, CPUFreq, CPUIdle, GPIO, HID, iiO, InfiniBand, LightNVM, MD, MFD, NVDIMM, NVMEM, PWM, SCSI, SoCs, USB, Xen, uye zvakare yemambure akadai sekukanganisa kwakagadziriswa kweMakadhi asina waya kubva kuMarvell, Realtek rtl8821ae, Atheros ath9k uye ath10k uye zvimwe zvakawanda zvidiki diki zvaungatoedza kana iwe ukaenda kune iyo kernel.org webhusaiti, kubva kwaunogona kurodha chero vhezheni yeiyo kernel.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux 4.5.4: iyo nyowani kernel vhezheni iri kunze